Qof kale ayaa sameyn doona, Worldwide Church of God Switzerland (WKG)
Muuqaalka guud ayaa ah inaadan u baahnayn inaad wax sameyso maxaa yeelay qof kale ayaa sameyn doona. Qof kale ayaa miiska nadiifin doona miiska maqaayadaha cunnada degdega ah. Qof kale ayaa warqad u qori doona tifaftiraha wargeysyada mawduuca. Cid kale ayaa qashinka ka nadiifin doonta meelaha lagu lugeeyo. Taasi waa sababta aan u dareemi karo xorriyad waxaana tuurin karaka qaxwahayga dariishadda daaqad ahaan.
Waa inaan taabto sanka naftayda halkan, sababtoo ah gabi ahaanba anigu ma ihi mid aan dambi lahayn marka laga hadlayo aragtidan. Xitaa haddii aan qashinkayga ku tuurin daaqadda, inta badan waxaan isu arkaa inaan ahay "qof kale". Markii carruurteyda ay ahaayeen dhalinyaro, waxaan go aansaday inaanan safrin, laakiin inaan guriga la joogo inta lagu jiray sannadahan. Intii ninkaygu ku maqnaa safarrada ganacsiga, ayaan hadda qabtay howlihii uu hore u qaban jiray.
Badanaa waxaan ahaa qof kale. Markii fursadda u soo baxday inay ka shaqeyso haweenka haweenka shaqadooda ama ay bixiso khudbad, waxaan garbaha ka fiiriyay si aan u arko cidda kale ee xorta ah waxaanan garwaaqsaday inaan ahay qofka keliya ee kacay. Had iyo jeer maan dooneynin, laakiin marar badan ayaan ku booday oo mararka qaarkood runti maan garanayn waxaan ku iri "haa" to.
Dhowr qof oo Kitaabka Quduuska ah ayaa isku dayay inay sumcadooda siiyaan iyo howlaha kale ee ku lug leh qof kale, laakiin ma aysan shaqeynin. Muuse wuxuu sameeyey cudurdaar wanaagsan si uusan ugu noqon Masar. Oo Gidcoon wuxuu weyddiiyey inuu Ilaah runtii isaga la hadlay. Dagaalyahan xoog badan? Ma ihi! Yoonis wuxuu isku dayay inuu cararo, laakiin kalluunku way ka dheereeyeen isaga. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu noqday qof uu rajaynayay inuu qabto shaqada. Markuu Ciise dunida u soo galay isagoo ilmo ah, isagu ma ahayn qof keliya, wuxuu ahaa kan keliya ee samayn kara wixii loo baahan yahay in la sameeyo. Adduunyadan dhacay waxay u baahan yihiin "Ilaah inala jiro". Ma jiro mid kale oo daweyn kara kuwa buka oo dabaylaha dabayl qaba. Ma jiro qof kale oo dadka ku dhex dhaqaajin kara ereyadiisa sida ugu badan ee isagu ama iyadu ugu fadhiyi karaan hal kalluun oo kalluun ah. Ma jiro qof kale oo fulin kara waxsii sheeg kasta oo Axdiga Hore siduu yeelay oo kale.
Ciise wuu ogaa sababta uu u yimid dhulkaan weligiisna wuxuu ku tukaday beerta inuu ku sii daayo jaahilnimada aabaha. Si kastaba ha noqotee, wuxuu raaciyay codsiga "haddii aad rabto" oo wuxuu ku duceeyay inaysan taasi noqon doonin, laakiin doonista aabaha. Ciise wuu ogaa in qofna booskiisa iskutallaabta dusheeda loo qaadin, maxaa yeelay ma jirin cid kale oo dhiiggooda uu xorreyn karo binu-aadmiga dembiyadooda.
Noqo qof Masiixi ah badanaa wuxuu la macno yahay inuu noqdo qofka masuulka ka ah oo dhaha "Waan sameyn doonaa!" Ciise wuxuu inoogu yeedhay inaan noqono qof jawaabtiisa ka jawaabaya oo fulinaya amarkii boqornimada ee ahaa inaan jeclaano walaalaheena.
Markaa yaan loo eegin bidix iyo midig qof kale, laakiin samee waxa loo baahan yahay in la qabto. Aan dhammaanteen noqonno sidii Ishacyaah oo Ilaah ugu jawaabay: "Waa i kan, i dir!" (Ishacyaah 6,5).